कोरोना महामारी : हाम्रो आत्मबल बढेको कि लापरवाही ? – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
२३ असार, २०७७ ०६:३२ मा प्रकाशित
अहिले मुलुक लकडाउनमा छ । किन ? किनभने मान्छेको भिडभाड र आपसी घुलमिल नहोस् भनेर । कोरोना भाइरसको औषधि एवं खोप आइसकेको छैन । यही कारण कोरोना भाइरसजस्तो संक्रामक रोगबाट जोगिन लकडाउनलाई अहिले एउटा विकल्पको रुपमा अपनाइएको हो ।
तर सडकमा हेरौं वा सहरमा, गल्लीमा पुगौं वा बस्तीमा, मान्छेहरू चहलपहल कम छैन । किनमेल गर्न वा अत्यावश्यक कामका लागि मात्र होइन, मान्छेहरू घरबाहिर निस्केर टहल्न वा रमाइलो गर्न पनि भिडमा मिसिँदैछन् । न शारीरिक दुरी कायम गरिएको छ, न मास्कजस्ता सुरक्षात्मक विधि अपनाइएको छ । के अहिले हाम्रो मनोविज्ञान परिवर्तन भएको हो ? कोरोनाप्रतिको भय हटेको हो ? वा हामीमा आत्मबल बढेको हो ?
अहिले जसरी मान्छेको भिड र घुलमिल बढ्दैछ, त्यसले केही कुरा संकेत गर्छ ।
१. मानौं, कोरोना भाइरस निर्मूल भइसक्यो वा यसको अब कुनै जोखिम छैन ।
२. मानौं, कोरोना भनेको तातो पानी पिएर, हाँच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेर उडाउन सकिन्छ ।
३. मानौं, हामीमा कोरोनाको भाइरस पचाउने क्षमता छ ।
४. मानौं, कोरोनाको संक्रमण भएपनि मरिँदैन ।
भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै सल्कदैछ कोरोना
हिजोसम्म हामी सर्तक एवं सजग थियौं, कोरोनाको जोखिमप्रति । तर अहिले हामी यसरी बद्लिदैछौं, मानौं कोरोनाको कुनै डर छैन । जबकि भुसको आगोजस्तै कोरोना भाइरस भित्रभित्रै सल्किरहेको पाइन्छ ।
अहिले दिनहुँ सैयौं संक्रमित बढ्दैछन् । अझ परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने यो संख्या बढ्न सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हालसम्म १५ हजार ४ सय बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् । त्यसमध्ये ३४ जना संक्रमितको कोरोनाले ज्यान लिइसकेको छ । वैश्विकस्तरमा पनि कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दो छ ।
विश्वमा कोरोना भाइरसकै कारण पाँच लाखको मृत्यु भइसकेको छ । एक करोड १२ लाख बढी कोरोना संक्रमित छन् ।
अब कोरोनाको डर छैन ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दो क्रममा वा नियन्त्रित अवस्थामा छैन । कोरोना संक्रमण पूर्णत: नियन्त्रणमा आइसकेको भनिएका कतिपय मुलुकमा पुनः यसको संक्रमण फैलिएको छ । कोरोनाको केन्द्रबिन्दु भनिएको चीनको वुहानमा दोस्रो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, कोरोना संक्रमण भएर निको भइसकेका व्यक्तिमा पुनः यसको संक्रमण देखिएको छ । नेपालमै पनि यस्तो घटना दोहोरिएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार कोरोना भाइरसविरुद्ध शरीरमा जुन एन्टिबडी निर्माण भएको छ, त्यसले लामो समय वा आजीवन काम गरेको पाइँदैन । कोरोना भाइरसविरुद्ध शरीरमा बनेको एन्टिबडीको असर दुई-तीन महिनामै सकिएको विभिन्न अध्ययनबाट थाहा भएको छ । यस हिसाबले पटकपटक कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै छ।
भर्खरैमात्र अर्को डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ, काठमाडौंको ढलमा कोरोना भाइरस फेला परेको । उपत्यकाभित्रको ४ स्थानको ढलको नमुना परीक्षण गरिएकोमा दुई स्थानको ढलमा कोरोना भाइरस भेटिएको हो । यसको निचोड के भने, उपत्यकामा समुदायमा भित्रभित्रै कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको छ ।
हामीकहाँ कोरोना परीक्षणको दायरा एकदमै साँघुरो छ । सबैतिर यसको पहुँच पुर्‍याइएको छैन । यही कारण पनि कोरोना संक्रमित जुन रुपमा बढ्दो छ, त्यसअनुसार बाहिर नतिजा आउन सकेको छैन ।
लकडाउन भएसँगै भारतबाट लाखौं मजदुर स्वदेश भित्रिएका छन् । सहरका मान्छेहरू गाउँगाउँ पुगेका छन् । कतिपय विदेशमा रहेकाहरू पनि घर फर्किएका छन् । यसबाट पनि के स‌ंशय पैदा हुन्छ भने कतै भित्रभित्रै कोरोना भाइरस फैलिरहेको त छैन ?
‘जो अगुवा उही बाटो हगुवा’
नेपाली समाजमा प्रचलित एउटा उखान छ, ‘जो अगुवा, उही बाटो हगुवा ।’ हामीकहाँ अहिले यस्तै परिदृश्य देखिन्छ । केही समयअघि मात्र एउटा तस्विर सार्वजनिक भयो, मुलुकका शीर्ष नेताहरू मुखमा मुख जोडेर गफिइरहेका थिए ।
उनीहरूले नै नीति–निर्माण तहमा रहेर मुलुकलाई कोरोनाको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन लकडाउन गर्नुपर्छ भनेका हुन् । उनीहरूकै कुरा शिरोपर गर्दै सर्वसाधारण घरभित्र थुनिएका छन् । तर नेताहरू भने मुखमा मुख जोडेर भिड लगाइरहेका छन् । उनीहरू स्वयं कोरोनाको जोखिप्रति सचेत र सर्तक नभएका हुन् वा कोरानाले केही गर्दैन भन्ने मनोबल बढाएका हुन् ?
कोरोना भाइरस अरू घातक भएमा ?
कोरोनाजस्तो भाइरसले आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गर्छ र यो अरू घातक बन्ने खतरा हुन्छ । केही समयअघि वैज्ञानिकहरूले ६२ वटा देशबाट कोरोना भाइरसका ५३ सयभन्दा बढी संक्रमितको जिनोमको विश्लेषण गर्दा के पाए भने कोराना भाइरसका केही उपप्रजातिहरू आफूलाई परिवर्तन गरी मानव शरीरमा बिस्तार हुने उपक्रममा छ । उक्त अध्ययनअनुसार अधिकांश भाइरस स्थिररहे पनि केही उपप्रजातिहरूले आफूलाई परिवर्तन गरी मानव शरीरमा अनुकूलित भएको देखिन्छ ।
यस्ता भाइरसहरुले मानव शरीरभित्रै आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर थप घातक बन्न सक्छ । हामीकहाँ अहिलेको अवस्थामा जसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दैछ, त्यही अनुरुप भाइरसले आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गर्दै अरू घातक भएमा के होला ? कोरोना भाइरसको संक्रमण अरू भयावह र जटिल भए के होला ?
हाम्रो जस्तो कमजोर चिकित्सा प्रणाली र पहुँच भएको मुलुकमा यसले भयानक संकट निम्याउने खतरा रहन्छ । त्यसैले भोलिको सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गरेर पनि आज हामीले थप सर्तकता अपनाउनुपर्ने हो । तर हामी त अरू लापरवाही गरिरहेका छौं । हामीकहाँ कोरोना नियन्त्रणमा आएको छैन, बरु अरू तीव्र रुपमा बढ्दैछ । यस्तो अवस्थामा कोरोनाले शरीरभित्रै आफ्नो स्वरूप बदलेर अरू घातक बन्ने जोखिम छँदैछ । तर अहिले हामी यसरी लापरवाही गर्दैछौं, मानौं कोरोनालाई हाँच्छ्यु–साच्छ्युँ गरेर, तातो पानी पिएर सजिलै उडाइदिन सकिन्छ ।